musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » Zvakachengeteka muParis nekuratidzira kukuru uye COVID?
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Paris yakaoma mitezo sezvo zviuru zvevanhu zvichiratidzira kupokana neCOVID-19 hutano hunopfuura
Vaya vasina mushonga wekudzivirira COVID-19 asi, kana kuti havasi kuronga zvachose, vanoti hutano hunoderedza kodzero dzavo uye hunovashandura kuva vagari vekirasi yechipiri.
Mhirizhonga yakawanda inoputika muFrance pamusoro pe COVID-19 kupfuura kwehutano.
Kupfuura 200 kuratidzira kwakarongwa muFrance kwanhasi.
Vagari veFrance vanoungana vachipesana nechavanoti kutyora kodzero dzevanhu.
Mapoka makuru evaratidziri akazadza migwagwa yeParis neMugovera, achiunza zviitiko zvese zveguta kumisa nekuparadza guta guru reFrance.
Zviuru zvevaratidziri vakafamba nemuBoulevard Saint-Marcel kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweguta vakananga kuPeace de la Bastille, vachisangana nechavanoti kutyora kodzero dzevanhu.
Zvese mune zvese, pamusoro pe200 kuratidzira vachipesana neinonzi iyo COVID-19 yekupfuura hutano yakarongerwa Mugovera kuyambuka Furanzi.
Vanhu vaive vakabata zvikwangwani zvakanyorwa kuti 'Mira', vachiimba 'Rusununguko' uye vachiridza ngoma. Vamwe vevaratidziri vakaonekwa vakapfeka zvipfeko zveyero - mucherechedzo weimwe hofori yekuratidzira yaive ichishanda muFrance kwerinenge gore nehafu pakati paGumiguru 2018 naKurume 2020.
Vamwe zviuru zviviri vakapinda mukufora uku, sekureva kwenhau dzeFrance. PaPaul de la Bastille, kwaifamba kufora, mapurisa akashandisa gasi rinobvarura kurwisa boka revaratidziri vaida kujoina kuratidzira.
Varatidziri vakaedzawo kutsauka munzira huru yekufora muParis pane dzimwe nguva dzinoverengeka, zvichikurudzira mapurisa kuti apindire, vezvenhau veFrance vakataura. Misangano yakaenda murunyararo neimwe nzira.
Kuungana kukuru kwakaonekwawo mune dzimwe nzvimbo dze Paris. Yese misangano mishanu yakarongerwa muguta guru reFrance neMugovera. Vanhu vazhinji vakaungana padyo neEiffel Tower. Varatidziri vacho vaisimudza mireza yenyika yeFrance uye vanga vakabata chikwangwani chihombe cheorenji chakanyorwa kuti 'Rusununguko'.